🥇 ▷ Halo Infinite waxaa ka mid noqon kara microtransactionaction-ka la isku qurxiyo ✅
Halo Infinite waxaa ka mid noqon kara microtransactionaction-ka la isku qurxiyo
In kasta oo ay weli jiraan waqti badan oo loogu talagalay Halo Infinite, qaybinta xigta ee ereyga ugu caansan taariikhda Xbox, ee tallaabooyinkeedii ugu horreeyay, midkoodna ku saabsan kuxirka qoyska Xbox One ama mustaqbalka ‘Xbox Scarlett’. Si kastaba ha noqotee, Thanks to dhacdooyinka sida E3 2019 (halkaas oo aan ku arki karno dhul gariir yar) iyo warar kale oo soo baxaya, in yar si yar ayaan u ognahay faahfaahin dheeraad ah oo ka badan inta ay ballanqaadeyso inay noqon doonto gaarsiinta himilooyinka ugu badan.
Haddii dhowaan aan ka hadli karno dadaallada ay sameeyeen 343 kooxda Warshadaha sameynta si ay u sameeyaan olole xusuus leh, maanta waxaan ka wada hadli karnaa dalab shaqo oo ka dhex muuqday shirkadda si diirada loogu saaro dhinacyo dhowr ah, oo midkood had iyo jeer muran ka jiro: waxyaabaha la isku qurxiyo ee la isku qurxiyo.
Marka loo eego Gears 5, Badda Tuugyada iyo sidoo kale Halo Infinite, micropayments microsay ayaa imaan doona
Qalabyada Ciyaaraha ee ‘Xbox Game’ waxay u muuqdaan kuwo looga golleeyahay baabi’inta sanduuqyada bililiqada (oo loo yaqaan sida loo yaqaan sanduuqyada bililiqada) dhammaan kulamadooda, sidaa darteed baabi’inta sirta marka ay timaado helitaanka waxyaabo ka kooban waxyaabaha la isku qurxiyo ee ciyaarahayaga. Dabcan, taasi micnaheedu maahan in waxyaabaha lacag bixinta (qurxinta, muhiim u ah in la xasuusto dhowr jeer) ay ka baaba’aan ciyaaraha hadda jira, maadaama ay yihiin il dakhli fiican shirkadaha isla markaana adeegsadayaal badan ayaa sidoo kale ku raaxaysta suurtagalnimadaas.
Shaqada shaqada (kiiskan marka loo eego “Madaxa Bulshada” ee Naqshadeynta) ma aha oo kaliya diiradda saaraya microtransaction laakiin sidoo kale dhinacyo kala duwan oo bulshada ah, sidaa darteed waxay u soo jiidataa ciyaartoy ku lug leh oo doonaya inay ka mid noqdaan ka qaybgalayaasha (waxyaalaha la isku qurxiyo waa la iibsanayaa ama ma aha). Waxaan kaaga tageynaa soo saarista muujineysa suurtagalnimada in microtransmarks-ku ka muuqdo Halo Infinite:
Naqshadeynta iyo hormarinta khibradaha AAA ee loogu talagalay ciyaaryahanka kaas oo diirada saaraya taageerayaasheena iyo rabitaankooda ah inay muujiyaan sida ay u jecel yihiin la wareegistayada (oo ay ku jiraan laakiin aan ku koobneyn microtransaction).
Waa inaan la iloobin, si kastaba ha noqotee, in tani aysan ahayn wax adduunka kale ka yimid, maxaa yeelay gudaha Halo 5: Ilaaliyeyaasha Horey ayey suurtogal u ahayd in maqaar gaar ah laga helo dukaanka ay ku jiraan ciyaarta, marka lagu daro awood u lahaanshaha iibsashada sanduuqyada bililiqada. Hadda oo kuwan la doonayo in la tirtiro, ma ahan xulasho xumo in lagu daro microtransaction loogu talagalay ciyaartoydan doorbideysa inay astaan ​​u yeeshaan dabeecaddooda wixii ka baxsan xulashooyinka ciyaarta lagu dari doono. Si aad u kala xulasho dheeraad ah, dhammaanteen waan ciyaareynaa dhammaantoodna waan guuleysanaa.